Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ihotele yoShishino olugqibeleleyo kunye ne-Spa eTaipei, eTaiwan
Igumbi lokuhlala likaMongameli weRegent Taipei
URegent Taipei ufumene izihloko ezithathu ezibekekileyo awongwa ngamaBhaso okuHamba eHlabathi adumileyo kunye neeMbasa zeHlabathi zeSpa. URegent Taipei uphumelele iiMbasa ezimbini zokuHamba zeHlabathi, “IHotele yoShishino oluKhokeleyo eTaiwan ngo-2021" kwaye i "IHotele eNgcono yaseTaiwan yowama-2021“, kwaye iWespring Spa kaRegent Taipei iphumelele”IiMbasa zeHlabathi zeSpa: Eyona Hotele yeSpa yaseTaiwan eGqwesileyo ngo-2021” iminyaka emithandathu ilandelelana ukusukela ngo-2016.
IiMbasa zeHlabathi zokuHamba kunye neeMbasa zeHlabathi ze-Spa zezinye zezona ziwonga zibalaseleyo nakhuphisanayo njengoko iibrendi zazo zivunywa njengophawu lokugqwesa kweshishini. IWorld Travel Awards yasekwa ngo-1993 “ukubulela, ukuvuza nokubhiyoza ukugqwesa kuwo onke amacandelo abalulekileyo okhenketho, ukhenketho kunye neshishini lokubuka iindwendwe”. Iziphumo zilandela ukhangelo olude oludinayo lwezona mpawu ziphezulu zehlabathi zokubuka iindwendwe ngelixa zisenziwa ziingcali kushishino kunye noluntu, apho umtyunjwa wafumana ezona voti zininzi kudidi oluthiywe njengophumeleleyo. U-Regent Taipei unebhongo ngokuphumelela “iHotele yeShishini eliKhokela eTaiwan ngo-2021” njengoko iSuite kaMongameli yethu iphumelele i-“Taiwan’s Leading Hotel Suite 2021”.
IiMbasa zeHlabathi ze-Spa zisikhumbuzo sokugqwesa kwishishini le-spa kunye nempilo entle. Ukukwazi ukuphumelela eli bhaso libalaseleyo ngokuchasene nokhuphiswano oloyikekayo ngumsebenzi onzima ngokwenene. I-Oscars yeshishini le-Spa - i-World Spa Awards iveze abaphumeleleyo bayo ngo-2021; I-Regent Taipei's Wellspring Spa, kunye nonyango oluphambili kunye nenkonzo yeenkwenkwezi ezintlanu, iphumelele i-"Spa yeHotele yaseTaiwan" iminyaka emithandathu ilandelelana ukususela ngo-2016. Ngeli bhaso, i-Wellspring SPA ayikhange ifumane ukubonakala kwamanye amazwe kwi-Regent Taipei, kodwa kunye neTaiwan. ngokwayo - ibeka ngokuqinileyo iTaiwan kwindawo yokuhamba ngamazwe ngamazwe.
U-Regent Taipei usoloko ekholelwa ngokuqinileyo "Kuzisa ezona zilungileyo zehlabathi eTaiwan kwaye zizise okona kulungileyo kweTaiwan kwihlabathi"; ke ngoko, ngaphandle kobhubhane, ukubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu ngelixa kuqinisekiswa indawo ekhuselekileyo kubo bonke bekusoloko kuyeyona nto iphambili. Ngelixa uzulazula kulo bhubhani, uRegent Taipei womeleze amanyathelo okuthintela ubhubhane ngokufaka itekhnoloji yokukhanya ye-ultraviolet yokubulala iintsholongwane, i-BioLED 365 Care, kwaye inyanzelise amanye amanyathelo amaninzi. Ngomhla woku-1 kuSeptemba, u-Regent Taipei kunye no-Just Sleep Ximen bafumana iSitampu sokuHamba esiKhuselekileyo esikhutshwe yi-WTTC kwaye ngokusemthethweni baba lilungu le-MICE Safe Safe Reception Reception Service Chain. Iqela lehotele leSilks elifumana i-WTTC iSitampu sokuHamba esiKhuselekileyo siqaqambisa umzamo wethu oqhubekayo wokubeka impilo yeendwendwe kunye nokhuseleko kwindawo ephambili ngexesha lo bhubhani.
Regent Taipei Idilesi: No. 3, Ln. 39, Umz. 2 ZhongShan N. Rd.